कोरियाबाट यसवर्ष २६ नेपालीले गरे पिएचडी ! « Bagmati Online
कोरियाबाट यसवर्ष २६ नेपालीले गरे पिएचडी !
सोल | दक्षिण कोरियामा अध्ययनरत २६ नेपाली विद्यार्थीले यो वर्ष विद्यावारिधि (पिएचडी) उपाधि हासिल गरेका छन्। कोरियाका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट २६ नेपाली विद्यार्थीले विद्यावारिधि गरी दीक्षित भएको नेपाली विद्यार्थी समाज दक्षिण कोरिया (सोनसिक)ले जानकारी दिएको छ।
कोरियामा अन्डर ग्याजुएट अध्ययनका लागि पूर्ण छात्रवृत्ति पाउने बाहेक अन्य विद्यार्थीका लागि आर्थिक रूपमा निकै कठिन हुने गरेको यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी बताउँछन्। कोरियामा विज्ञान, इञ्जिनियरिङ, कृषि, मानविकीलगायतका विषय अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थी आउने गरेका छन्। हाल झन्डै २ हजार नेपाली विद्यार्थी कोरियामा अध्ययनरत रहेको समाजको तथ्याङ्क छ।